पानीको अभावले शौचालय जानु पर्ला भनि रातिको खाना खादैनन् बिरामी, AIBT बारे बोल्यो सरकार (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
पानीको अभावले शौचालय जानु पर्ला भनि रातिको खाना खादैनन् बिरामी, AIBT बारे बोल्यो सरकार (भिडियो)
प्रकाशित मिति : Mar 05, 2019
काठमाडौं । न्युज २४ टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज ३४८ औं एपिसोड हो । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा पनि विभिन्न विशेष रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ । साथै, विभिन्न विषयमा विशेष ब्यक्तित्वहरुसँग प्रत्यक्ष कुराकानी पनि गरिएको छ ।
१. पाटन मानसिक अस्पतालमा पानी नभएकै कारण सरसफाई हुन सकेन !
काठमाडौं । काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी आउला भन्दै दिन, महीना र वर्ष गन्न लागेको २ दशक बढी भयो । तर अहिलेसम्म झ्याप्पै मेलम्चीको पानी आउने कुनै छाँटकाँट छैन । यहाँ मेलम्चीको पानिको बिषय उठाउन भने खोजिएको होइन । यो त ललितपुरको पाटनमा अवस्थित मानसिक अस्पताल को कुरा हो । यस अस्प्तालको नेतृत्वमा बसेका कर्मचारी भन्छन् मेलम्चीको पानी आए अस्पतालमा सरसफाई हुन्छ विरामीले पनि पानी पाउछन् ।
२. अष्ट्रेलियामा अलपत्र विद्यार्थीहरुको उद्धार कसले गर्ने ?
काठमाडौं । व्याचलर इन नर्सिङको अनुमति नै नभएको अष्टे«लियन इन्स्टिच्युट अफ बिजनेश एण्ड टेक्नोलोजी एआइबीटीमा विद्यार्थी पठाउने नेपालका कन्सल्टेन्सीका विषयमा नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयले गम्भीर देखिएको छैन । एआबीटीले अष्टेलियन नर्सिङ काउन्सिलबाट नर्सिङ अध्ययन गराउने अनुमति नलिई कक्षा सञ्चालन गरेको थियो । र त्यही कलेजमा नेपालमा रहेको कन्सल्टेन्सीहरुले विद्यार्थी पठाएका थिए ।
३. वैदेशिक रोजगार विभागले १३ दिनसम्म मेनपारविरुद्ध पत्र काटेन !
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीको लापरवाहीका कारण बसुन्धारा स्थित क्यापिटल रिकुमेन्ट सर्भिस प्रा.लि.बाट पीडित बनेको सुरेन्द्र दास र सन्तोष बि.क. झन् समस्यामा परेका छन् । क्यापिटल रिकुमेन्टसका सञ्चालक नीता गौतम र टंक सुवेदीकै निर्देशनमा दास र बि.क.सँग ८ लाख रुपैयाँ लिएको स्टिङ गरेका थियौँ । त्यसका भोलिपल्ट पीडित दुवै जनाले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गरेका थिए । विभागमा उजुरी परेको सामान्यत २ दिनमा कारवाही भइसक्नु पर्ने विभागकै निर्देशक भोलानाथ गुरागाँई बताउँछन् ।